पोखरा विमानस्थल निर्माणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानको तयारी थाल्न आग्रह! - Subhay Postपोखरा विमानस्थल निर्माणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानको तयारी थाल्न आग्रह! - Subhay Post
पोखरा विमानस्थल निर्माणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानको तयारी थाल्न आग्रह!
सुभाय् संवाददाताMarch 16, 2021 मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
पोखरा । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान संचालनको लागि तत्काल पहल गर्नु थाल्नुपर्ने आवाज उठेको छ । सोमबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले सरोकारवालासँगको छलफलमा विमानस्थल निर्माण भएसँगै संचालनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान गर्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।